Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Aza manjehy ny andro ho lava e!
INTY SY NDAY: Aza manjehy ny andro ho lava e!
Misy oha-pitenenana Malagasy feno fahendrena izay manao hoe “aleo enjehin’ny omby masiaka, toa izay enjehin’ny eritreritra”. Dia mby amin’izany ny saina aman’eritreritra raha mandinika ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny. Miantefa any amin’ny fihetsika ny tompon’andraiki-panjakana isan’ambaratonga ny maso. Tsinjo fa toa sanatriavin’ny vava, “maty eritreritra” avokoa ry zareo. Nefa ange ka miseho ho olon’Andriamanitra avokoa isaka ny miseho vahoaka e? Mody be fiantrana ny sahirana. Mody mahay manao tsianjery ny tenin’ny Soratra Masina, sy ny sisa.
Izany no mahatonga anay hanontany azy ireo hoe “mbola mba mandry ihany ve ny feon’ny fieritreretanareo?” Raha mbola olombelona koa aloha ka mbola azo heverina ho manam-panahy, dia tsy handry eritreritra amin’izao manjo ny vahoaka izao, indrindra fa raha manao jery kiana kely fotsiny ireo mpitondra dia hahatsapa fa manana anjara andraikitra sy dian-tanana amin’izao zava-doza mihatra amin’ny firenena izao.
Tsy mino izahay fa hanana feon’ny fieritreretana mandry ianareo saingy mavesa-danja kokoa ny mbola fiandrandrana ny tombontsoa manokana, na segaondra iray farany aza, dia miezaka mamono tena mafy mikatsaka izany.
Misarika ny fisainanareo ihany izahay. Aza heverina ho zaza bodo na adala sy kentrina re ity vahoaka Malagasy ity rehefa mangina e! Tsy mandefitra akory izy io fa mandinika, ka aza sodokan’ny fahanginan’ny maro, fa loza ho anareo io raha mitraotra eo.
Tsy tsapanareo mpitondra isan-tokony mihitsy ve fa efa feno ny fepetra tokony hipoahan’ny hatezeram-bahoaka aminareo amin’izao fotoana? Sa mbola eritreretinareo fa mbola ho ela ny ho fahatsiarovan-tenan’ny vahoaka ka holalaovinareo lava toa izao? Aza manjehy ny andro ho lava, na izany aza, hoy ny fahendrena malagasy koa, fa tsinjovy ihany ny farany.
Ataovy zinona ihany ny raharaha rehetra fa mahay ianareo, ary tandremo sao mitsoaka mandositra rehefa tonga ny fotoana hipoahan’ny sarom-bilany.